Noocyada Beddelka OE
Qaar kale Brands
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka / Mashiinka Mashiinka
Ballaaran Hedge Trimmer Blade
Waa maxay qalabka qalabka caws-gooye
Qalab noocee ah ayaa leh cawska goos gooska? Warshada Badeecada Zhengchida waxay noo sameyn doontaa falanqeyn xirfadeysan. Qalabka qalabku waa qodobka aasaasiga ah ee go'aamiya waxqabadka goynta aaladda, taas oo saameyn weyn ku leh waxtarka wax-qabadka, tayada wax-soo-saarka, qiimaha wax-soo-saarka ...
Sida loo doorto daab cawska ower
Astaamaha lagu jaro cawska waa shaqo fidsan, hawlgal fudud, iyo awood goyn xoog leh oo loogu talagalay walxaha u baahan in la jaro, oo u badan cawska, waxayna ku habboon yihiin cawska iyo beeraha waaweyn ee wax soo saarka badan. Goynta cawsku waxay gooysaa cawska dhaqdhaqaaqa xiirashada qaraabada ...
Qaar ka mid ah daab laalaab ayaa adeegsada ma ogid
Waan ognahay inay jiraan qaabab fara badan oo ah caleemaha goynta cawska, sidaa darteed way nagu adkaatay inaan doorano. Sidee loo doortaa caleemaha goynta cawska? Sidee loo hagaajiyaa daab cawska? Iyo sida loo isticmaalo loona ilaaliyo caleemaha goynta cawska? Tifatiraha soo socda ayaa ku soo bandhigi doona. Sidee loo hagaajiyaa daabka la ...
22aad Hortiflorexpo IPM Beijing Sebtember 16-18 2020
Kooxda iibka ee Zhengchida ayaa kaqeyb gashay Bandhigii 22-aad ee Hortiflorexpo IPM Beijing Exhibition inta lagu gudajiray Sept 16-18th, 2020. Xafladii furitaanka waxay ahayd daawasho wanaagsan. Sababtoo ah convid-19, tani waa bandhigii 1aad oo kaliya ee aan ...
Qalabka Farsamada ee otomaatiga ah Kacaankii geeddi socodka
Muddo aan fogeyn ka hor, Zhengchida waxay aqoon-isweydaarsiga ku yeelatay xubno cusub, kuwaasoo la yimid wax-soo-saar tayo sare leh iyo tayo wanaagsan. Waxay yihiin Hubka Farsamada otomaatiga ah. Mashruuca horumarinta mashiinada otomaatiga ah waxaa la bilaabay horaantii 2019. Koox injineero khibrad leh ayaa loo sameeyay sidii ...
Sida loo rakibo Mowjada Mulching Blade
Noocyada Caws-gooyeyaasha Cawska: Goynta caws-ka waxay caadi ahaan isticmaalaan laba nooc oo garbaha. Badanaa, jaraya wuxuu isticmaalaa daab goyn. Qeybtaan waxay gooysaa cawska waxayna ku dhex saartaa dalool ka soo baxa makiinada gooya. Sidoo kale waa la isticmaalay waa daab mulching. Tan waxaa loogu talagalay in lagu gooyo cawska dhowr jeer loona rogo cawska ...
Cinwaankaaga: NO.188 XINXI ROAD, JINCHENG STRET, LINAN DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
Fakis: 0086- (0) 571-63704882
Maxay yihiin qalabka qalabka cawska m ...
Qalab noocee ah ayaa caleemaha goynta cawska ...
Astaamaha lagu jaro cawska waa ...
Qaar ka mid ah daab cawska gooyaa adeegsan maayo '...
Waan ognahay inay jiraan qaabab badan oo sharciga ...
22aad Hortiflorexpo IPM Beijing Sebtember 1 ...
Kooxda iibka ee Zhengchida ayaa kaqeyb gashay 22n ...
Qalabka Farsamada ee otomaatiga ah Kacaan ka ...
Mar aan fogeyn, Zhengchida wuxuu lahaa xoogaa mem cusub ...